Yemahara Chikafu Chinopihwa Nhasi Pedyo neni uye Emergency Chikafu Mabhangi
By Chrisking September 16, 2021 chikafu, zvinhu zvemahara zvemhuri dzinotambira mari shoma 0 Comments
- Mahara Chikafu Chinopa Nhasi Pedyo neni -
Tese tinoda rubatsiro pane dzimwe nguva. Parizvino, zvisati zvamboitika, iko kutarisira kweAmerican kurongeka kwemabhangi ezvekudya kuri pano kuzokubatsira iwe nekutambira kubvumidzwa kune chikafu uye rumwe rubatsiro.
Sezvo musimboti wechido munharaunda zvachinja, Chikafu Chengetedzo chave kusimukira. Mapurojekiti edu anotarisana nezvinodiwa zvekuungana kwakasarudzika, kusanganisira vechidiki, vanhu vakuru vane ruzivo, uye veterans.
Chokwadi Chinofadza Nezve Mahara Chikafu Chinopa Nhasi Pedyo neni
Usati watarisa kune Yemahara Chikafu Chinopa Nhasi Padhuze neni, ndokumbira utarise. Pedyo nemabhangi ezvokudya uye emahara ekuchengetedza chikafu nzvimbo inoshamisa nzvimbo dzekuenda kunotsvaga rubatsiro.
Nzvimbo idzi dzichapa chikafu chemahara, chikafu, zvekushambidzika zvemunhu, uye nemhando dzakasiyana dzerubatsiro rwemari.
Huwandu hukuru hwevanhu uye mhuri dziri kurwa nekutarisira mhuri dzavo pane fungidziro, uye nzvimbo yekuchengetera inzvimbo inoshamisa yekuenda kunotsvaga rubatsiro nanhasi.
Kunyangwe pamwe mune mimwe mwedzi vanhu vazhinji vakanaka, panogona kuve nenguva dzakasiyana nekuda kwebhiri rinoshamisa kana kuderera kwemubhadharo kunogona kuitisa kuyedza zvakanyanya.
Mune dambudziko, imba yemahara yekuchengetera chikafu (iyo yakanyorwa pasi nehurumende) inogona kubatsira.
Vazhinji vakaderera kuti vatungamire vanobhadhara mhuri zvakafanana vanorwira kuchengeta chikafu pamatafura avo nekuda kwekukwira kwemubhadharo wezvinhu zvakakosha sehupfumi husina simba.
Huwandu hukuru hwevanhu vanowana rumwe rudzi rwechikafu rubatsiro kubva kune izvi zvinotarisisa gore rega. Iwo mahofisi anobatsira nekutarisira vanoshanda, varombo, mhuri dzinogara mukushaiwa, sekungofananawo nemari dzinobhadhara mhuri.
Mhuri Dziri Kunetsekana Dzinoita Sei?
Sekunonoka, kutaura kubva kumukadzi kuyedza kuunza mudiki pa $ 8.00 paawa basa. Kubhadhara kwake kuri $ 635 mwedzi wega wega, uye kuchengetwa kwevana kunomubhadhara $ 175 pamwedzi, uye zvinoshandiswa $ 150.
Izvo zvinosiya $ 1,220 mwedzi wega wega mushure mekushandisa kunyatso tarisa kune vaviri vanhu.
Zvakare, izvo zvinosiya $ 65 vhiki yega yega kubhadhara zvekudya zvekutanga zvekufambisa / gasi, masikati, uye zvinopesana uye zvinopera. Uku ndiko kukosha kwevarombo vanoshanda.
Izvo hazviite zvakakwana kuti zvinyatso tarisa pamhuri yako, uye vazhinji vanoita zvakawanda kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Pane mukana uri kure waunoda, ungangoda kuenda kunzvimbo yemunharaunda yekuchengetera rubatsiro.
Rubatsiro Zvirongwa Zvinopihwa kuEmergency Chikafu Pantries
Zvisinei nedata pane nzvimbo dzekuchengetera chikafu dzakanyorwa pasi, mhuri dzine nzvimbo dzakasiyana dzekuenda kunotsvaga rubatsiro nhasi. Seimwe nzvimbo ichagara ichidzivirira nzara, kunyanya kune vana sekukura.
Saka kana iwe uchirwira, kune akasiyana maficha anowanikwa. Chikamu cheimwe sarudzo chinosanganisira:
Hurumende Chikafu Rubatsiro Zvirongwa
Hurumende yepakati inotungamira zvirongwa zvekubatsira zvisingaverengeki semubhadharo wakaderera semhuri dzinorarama muhurombo. Panogona kuve nerubatsiro kubva kuhurumende kungofanana nemasangano ematunhu. Ivo vanosvika nyika pamusoro.
Zvizhinji pane zvehurumende zvirongwa zvekubatsira chikafu.
Ruponeso Armed Force Chikafu Chekuchengetedza Nzvimbo Yekubatsira Zvirongwa
Iyi ndiyo imwe yenyika nheyo dzekutyaira. Iyo yechiKristu hwaro hwechitendero inotsigira vanhu vanopa mashoma pfungwa kune kwavo chitendero, dzinza, chinzvimbo chinzvimbo, kana zera.
Mahara emabhangi ezvekudya, makicheni esobho, dambudziko remari rubatsiro, uye kumwe kutarisira zvirongwa zviri pane kwese padhuze kutariswa. Ivo vanobatsira vasina dziviriro, vashandi, uye kurwisa mhuri. Tsvaga hunyengeri pa Ruponeso Mauto-asina simba mabhangi ezvikafu izvo zviri pedyo newe.
Ane mwero uye Akamisikidzwa pasi Kukosha Kudya
Masangano, semuenzaniso, Gabelli, Chingwa cheTarisiro, uye Mutsvene mutumwa Food Services ipa chikafu kusvika pamakumi mana muzana kubva pamutengo wakajairika wekutengesa.
Aya manejimendi anowanikwa kune chero munhu, achibhadhara mashoma kufunga kumubhadharo wavo, uye hapana mari yekushandisa. Izvi zvinobvumidza mhuri kusevha madhora mazhinji gore rega rega pazvikwereti zvavo. Shandura zvimwe pane chikafu chine mwero.
Masangano achapa vatengi mari dzakakosha dzekudyara kubva kumakoponi anogona kudhindwa zvakanaka.
Inogona kuvashandisa kubhadharira chikafu uye chikafu zvakadaro mukuwedzera zvinhu zveumwe munhu zvekutarisa, zvekupa zvipfuyo, uye zvinwiwa.
Izvi zvinogona kushandiswa kune chero mutengesi, kana kubatana nehutongi kubva kubhangi rezvikafu, kuchengetedza mhuri zvakanyanya.
Mhuri dziri kutsvaga dzimwe nzira dzakasiyana dzinogona kuwana imwe dhata pane yemahara coupon bargains. Ipo ivo vasingakwanise kushandiswa mukamuri yekuchengetera, chikafu chitsva chitsva zvakare sezvo ivo vachigona kutenga zvekushandisa zvemhuri vachizvishandisa. Kushandisa mabhengi ezvokudya uye makuponi kwakanyanya kubudirira.
Nguva dzeKudya, Zvese paKisimusi neKutenda
Izvi zvinowanikwa kubva kumabhangi ezvokudya mazhinji nenzvimbo dzekuchengetera. Vamwe vanopa chikafu chemahara sekungogadziriswa, kana kudya kwemanheru kwese, pamwe nezvipo zvidiki kana matoyi.
Kana ipapo zvakare vanoita kuungana uye kuungana kwemhuri yese. Tsvaga hunyengeri pane yakanakisa nzira yekuwana yemahara rubatsiro paKisimusi.
Vechidiki Vacheche Vechidiki - WIC
Iyi ndeimwe inozivikanwa hurumende rubatsiro chirongwa chevanhu vane mari shoma. Zvekuwedzera kukosheswa kuri pakuvimbisa vacheche kungofanana nanaamai vane nhumbu vanowana chikafu chavanoda.
Mahara kana mashoma mari yemabikirwo evana, zvekudya, uye rumwe rubatsiro runovaka runowanikwa, kazhinji semavhoti kana makadhi ekutarisa. Peruse zvimwe paWIC - Ladies Baby Vana chirongwa.
Zvidhindo Zvekudya kana TANF
Vakatenderedza makumi mana emamirioni eAmerica vanowana imwe mhando yemavocha ekudya kubva kuhurumende yepakati yakasimudzira chirongwa cheSNAP. TANF inogona zvakare kushandiswa kubatsira kubhadhara zvinodiwa.
Iwo mavhavha anogona kuburitsa yakaderera mari yemahara uye yakadzikira chikafu chemubhadharo. Zvimwe pane zvidhori zvekudya zveTANF.
Zvakakosha zvinodikanwa, semuenzaniso, zvemahara zvipo zvipo, zvekushandisa zvevana, shangu, zvekushandisa kuchikoro, rokwe rebasa uye zvimwe zvinogona kupihwa, kazhinji nhasi. Chipfeko chewadhi uye kutenderera kunotarisa zvinopa zvinhu mahara.
Kunyangwe nzvimbo idzi dzisingawanzo kuve nechikafu, kugona kuwana ichi chakasiyana zvinhu kubva pane zvinotariswa zvinogona kubatsira mhuri nekuvhura mari yavo yekutenga chikafu. Tsvaga kutumirwa kwezvipo kubva kumabhangi ekupfeka.
Maitiro ekuti uwane Mahara Zvinhu kubva kuCompany
Mahara Koreji Shirts
Maitiro Ekutengesa Shangu Pamhepo
Akanakisa Zvekudya Mabhangi uye maPateri Ari Pedyo neni
1. Kudyisa America
Kuchengeta maAmerican pakutanga yakatanga seyekuchenesa zvipo zvezvikafu muUS yese muna 1979. Nhasi uno ndiyo mubatanidzwa mukuru wenzara yekubatsira munyika.
Ivo vanobatana nemabhangi ezvokudya anopfuura mazana maviri uye makumi matanhatu emakamuri ekuchengetera uye mahofisi echirariro muUS
2. Makeke & Hove
Zvikamu neFish isangano re501 (c) (3) risingabatsiri. Chinangwa chavo kupedza nzara uye kutakura zvinotarisirwa uye rukudzo kunharaunda dzisina kuchengetedzwa.
Vakamhanya kushamwaridzana nerubatsiro rwevazvipiri uye nenzvimbo dzenzvimbo dzekunamatira chikafu uye zvekugezesa.
3. Hakuna Mwana Ane Nzara
1 pavadiki vana anorova huswa ane nzara nguva dzose. Iyo huru nzira huru iyo vashoma vechidiki vanowana yaive kuchikoro.
Nhasi semhedzisiro yedenda, zvikoro zvakawanda zvakavharwa uye zvaizosiya vana vadiki voziya nenzara kuitira kuti inge isiri yezvirongwa zvekudya.
Hakuna Mwana Ane Nzara ine 'mepu yezvikafu' uko iwe kwaunogona kuwana dzakasiyana nzvimbo munzvimbo yako kuti uwane chikafu. Pinda dunhu rako repositi, kana guta rako neguta kuti uwane madhiri emahara ari kupihwa padhuze newe.
5. Soup Makicheni nemaDinner Mahara
Zvakare nekuwana rubatsiro rubatsiro kubva kunzvimbo yemahara yekuchengetera chikafu, kune zvimwe zvinowedzerwa zvinopa madhiri, kunyanya veSalvation Mauto.
Vachavashandira vakatarisana, kuendesa pachena kana chando chikafu kune vanoenda kumba, kufudza vanhu panguva dzakakosha dzegore, uye zvakanyanya zvakanyanya.
Varombo, varombo, uye avo vari mune inononoka kukurumidza vese vaizokwanisa kuwana yemahara inopisa kana inotonhora mabiko kubva munzvimbo dzakasiyana dzinogona kunge dziri padhuze newe. Tsvaga rundown reSuponeso Armed force soup kicheni.
Chii chinonzi US Foods Banks Kutenga Chirongwa Pamusoro?
OneHarvest chirongwa chekutenga. Zviri asiri emasangano uye echitendero, yakavhurika kune vese vanhu. Chero ani zvake anogona kutenga chikafu zvakanyanya.
Mwedzi wega wega vane menyu. Yako pre-kukumbira pre-bundled nyama, uye miriwo, uye dzakasiyana chikafu chikafu uye uwane sarudzo yako panguva yakatarwa.
Mabhanga Ekudya emuno Anogona Sei Kubatsira?
Mabhanga emunharaunda anogona kubatsira kubatsira Mahara Chikafu Chinopa Nhasi Padhuze neni na:
Yakarongedzwa yemunharaunda chikafu chekutyaira kubatsira nekuendesa chikafu.
Kupa kunogona kutengesa kumabhangi ako ezvokudya ari pedyo kana kicheni yemuto.
Kana iwe uine mukana, funga kupinza mukicheni yemuto kana bhanga rekudya.
Rarama ne $ 7 zuva rega rega kuti uchengete mhuri yako, kuti uone kuti munhu ari sei SNAP anorarama.
Ratidza vana vako kuti vasashatise chikafu. (Tichifunga kuti iwe unofanirwa kuziva kuti vanhu vangani vanodya chikafu, enda kune chero buffet. Hazvinyaradzi)
Zvirongwa zveHurumende Zvinowanikwa Kubatsira Kwemazuva Ari Mberi
Zvisinei kuti wakarembera zvinonakidza here kana kuti wakashandisa rubatsiro rwechikafu pamberi pechirwere cheCoronavirus, zvirongwa zvakasiyana zvehurumende zvinowanikwa kuti ubatsire nekuita raramo yakanaka panguva dzinonetsa.
SNAP (Yekuwedzera Yekutsigira Rubatsiro Chirongwa)
Izvi zvinopa kune chimwe cheMahara Chikafu Chinopa Nhasi Pedyo neni. Izvi zvaimbozivikanwa sematampu ezvikafu. Kubva ikozvino inopa 1 kubva ku7 vekuAmerica nerubatsiro rwekuwana.
Ona kana iwe uchikodzera uye ona maitiro ekusvika kune ako SNAP mabhenefiti. Tinogona inowanikwa iwe neako epedyo chikafu bhangi chikumbiro chirongwa rubatsiro.
Vechidiki Zvekudya Zvirongwa
Vanopa mahara emanheru anonaka uye zvinwiwa kuvana pavanenge vasiri kuchikoro. Bata rako bhanga rekudya repedyo ku ona pane nzvimbo dzemanheru munzvimbo yako.
WIC (Vanasikana uye Vacheche Vechidiki) Zvirongwa
Ivo vanopa yakasimba, yekuwedzera chikafu kune vanobhadhara-shoma vanhu vane pamuviri uye vane vana vane makore mashanu zvichidzika. Ona kana uchikwanisa uye bata nyika yako WIC sangano kushanda.
Kuongorora kufambira mberi uku kumabasa ehurumende kunogona kunetsa panguva inoshungurudza muhupenyu hwako. Tiri pano kuzokubatsira iwe nekufunga zvese.
Takatarisana pamwe inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve shanduko kuchirongwa chekubatsira chikafu panguva yeCoronavirus.
Mahara Internet Mapurogiramu eMafoni
Ita Mari neMota yako
Chengetedzo yako kunetsekana kukuru kweKuchengeta America musangano. Sezvo Coronavirus inokanganisa nyika yedu, akawanda mabhangi ezvekudya, nzvimbo dzekuchengetera chikafu, uye zvirongwa zvemanheru zviri kuchinja kuvimbisa kuchengetedzeka kwevaenzi uye chikafu chavanoshandira.
Kugadziriswa kwekushomeka kana kusasangana kwekusangana parizvino kunowanikwa munzvimbo zhinji, kusanganisira vakuru-maawa mashoma, kupfuura-kuburikidza nemakamuri ekuchengetera, manejimendi ekufambisa kwedzimba, uye ndicho chingori chidimbu chechando.
Tsvaga nedunhu reposvo kana nyika uchishandisa wekuwana bhangi rekudya, uye bata webhangi rezvikafu rinoshandira dunhu rako. Ivo vanozotoda kukupa iwe dhata pane emahara dzimba dzekuchengetera uye mapurojekiti ari padyo newe.
Ndokumbira usiye chirevo nezve ichi chinyorwa pane Mahara Chikafu Chinopa Nhasi Padhuze neni. Zvakare, inzwa wakasununguka kuifarira, uye udza shamwari dzako uye mhuri nezvazvo.
Tags:machechi anopa chikafu pedyo neni, drive-thru chikafu chekudya padyo neni, chikafu chinopihwa padhuze neni nhasi, chikafu chinopihwa mangwana, mahara mahara pedyo neni, ndinoda kubatsirwa nechikafu nhasi, nharembozha yekudyara pantry chirongwa 2020 padhuze neni, nharembozha yekudyara pantry chirongwa 2021 padhuze neni
US Bank Bhangi Chikwereti Kuchinja: Ndiani Anokodzera Chikwereti Kuchinja
Inguvai Iyo McDonald Yakavhura uye Inovhara, Dhiraivha-iyo Kuvhura Maawa
Yakanakisa Maawa makumi maviri nemana Maresitorendi Pedyo Newe mune ese makumi mashanu States eU.SA.
Akanaka Nike Bhutsu Ekufamba, Kumhanya kana kweVanamukoti vanomira Zuva rese
Mahombekombe Akanakisa Munyika uye Anoshamisa Caribbean Zvitsuwa zveZororo
Akanakisa Varume Zvinodhaka uye Zvinoshamisa AntiPerspirants Kugara Nyowani
Akanakisa Exfoliators Yemeso uye Ese Mhando dzeGanda uye Iwo Anoshamisa Mabhenefiti
Akanakisa Anonakidza paNetflix uye makumi maviri neshanu Mafirimu Anonyanya Kufunga Ekutarisa
Theme kubudikidza MyThemeShop.	Dzokera Kumusoro ↑